“Redención” no sarimihetsika môzambikàna voalohany tafiditra tao anaty lisitra Netflix · Global Voices teny Malagasy
Mahazo habaka bebe kokoa ao amin'ilay sehatra ny vokatra afrikàna
Nandika (es) i Gabriela García Calderón Orbe
Voadika ny 26 Jona 2020 8:46 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Italiano, English, Nederlands, Ελληνικά, русский, 日本語, Português
Redención ao amin'ny Netflix. Pikantsary nataon'i Dércio Tsandzana.
Sambany no nampidirana vokatra 100% môzambikàna tao amin'ny Netflix. Hivoaka ao amin'io sehatra io amin'ny volana Jolay ny “Redención”, nosoratan'ilay Môzambikàna, Mickey Fonseca.
Sarimihetsika vokatry ny famatsiambola nifandrimbonana tamin'ny ampahany izy io, ary tao Môzambika no noraketina tamin'ny 2017. Ny vavahadin-tseraseran'ny Jornal Público no milaza ny tantaran’ilay sarimihetsika :
Ny tantaran'i Bruno no ifantohan'ny “Redención”, lehilahy iray te-hanova ny fiainany taorian'ny efatra taona laniny tany am-ponja sy nihaonany tamin'ilay zanany vavy naterak'izy sy Mia, rehefa ela ny ela.
Nezahany aloha ny nitady asa ho mpanamboatra ny simba amin'ny fiara (mécanicien), asa niofànany manokana, saingy tsy nahazoany vokatra izany. Nahitan'ny rahavavin-dreniny, izay vao nodimandry tsy ela akory, asa izy tao amina toerana iray fanamboarana fiara.
Saingy tsy nahomby io ezaka hanana fiainana vaovao io rehefa, tampoka teo, nandrahona ny haka ny tranon-dreniny ny banky raha tsy alohany ny fitrosàna vola nataon'ny reniny, izay tsy fantany velively ny fisiany. Ary dia eo ianao no tsy maintsy tafiditra amin'ny tontolon'ny heloka bevava.
Tamin'ny 2019, nalefa tamin'ireo efitrano andoavam-bola tao Môzambika, Angôla ary Pôrtiogaly ny “Redención”. Naseho ihany koa izy nandritra ireo fetibe tao Burkina Faso sy Zimbaboe.
Nomena voninahitra notolorana ny lokan'ny seho an-tsehatra tsara indrindra ihany koa ilay sarimihetsika, ary ny lokan'ny fitantànana artistika tsara indrindra, nandritra ny AMA Awards fanomen'ny African Film Academy, izay loka manandanja indrindra ho an'ny sarimihetsika afrikàna atao isan-taona ao Nizerià.
Mbola tamin'ny 2019 ihany, nahazo ny loka natao ho an'ny Sarimihetsika Feno Fahasahiana tao amin'ny Festival de Cine Zell tany Aotrisy izy.
Nolazain'i Fonseca tamin'ny vavahadin-tseraseran'ny Ministeran'ny Kolontsaina ao Môzambika fa voninahitra ho azy ny nahita ny sarimihetsika voalohany novokariny tafiditra ho ao anaty lisitr'ilay goavana mpivoy ny fanapariahana haino aman-jery virtoaly eto amin'izao tontolo izao:
Nalaza be tao amin'ny firenena ny “Redención” ary tena nampientanentana anay tokoa, satria fandavantena betsaka tokoa sy fitiavana manokan'ny tena no nentina niasa na nandrakitra azy. Tsy maintsy mitondra izany ho an'ny amin'izao tontolo izao izahay, mba ho ny rehetra no ho afaka hahita azy.
Ho azo jerena ao amin'ny Netflix arahana fandikàna ho amin'ny teny anglisy ilay sarimihetsika, vaovao iray izay nahafinaritra tokoa ireo Môzambikàna mpampiasa Twitter ny nandre azy:
Afaka jifaina amin'ny volana Jolay.
💣 ¡VAOVAO TSARA! 💣
Noraisin'ny NETFLIX ny fanapahankevitra handroso ny fotoana handefasany ny Redención arahana dika amin'ny teny anglisy, mba ho maro kokoa erantany no ho tratran'ilay sarimihetsika! 🤩🖤🎬🇲🇿
Ny volana Jolay ny fandefasana voalohany ny REDENCIÓN ao amin'ilay sehatra, fa tsy ny 1.
¡Araho ny vaovao!
Faly isika rehetra manana ny Redención ao amin'ny Netflix.
Afaka ny ho isan'ny revôlisiôna ara-javakanto isika, afaka maka sary an-tsaina ny hiroboroboan'ny indostria hafa rehetra, ny mozika, ny zavakanto natao hojeren'ny maso, sns… Mino aho fa ao anatin'ny taokantontsika, manana betsaka azo atolotra isika ary tokony fotsiny hino sy hanome VINTANA, tsy sarotra izany.
Tato ho ato, nahazo habaka bebe kokoa ao amin'ny Netflix ny vokatra afrikàna. Ohatra, ilay andian-tantara afrikàna tatsimo “Queen Sono”, andiantantara voalohany ao amin'ny Netflix izay tany Afrika daholo mihitsy no namokarana azy.
Ireo sarimiaina natao ho an'ny ankizy no vokatra afrikàna hafa misongadina ao anatin'ny lisitr'ilay sehatra: ohatra ny “Mama K's team 4“, mbola afrikàna tatsimo ihany koa, ary tsy toy irony klasika avy any Hollywood irony, toy ny “Lion Heart” sy “Chief Daddy.”